Oculus Rift dia azo tahirizina manomboka ny 6 Janoary | Androidsis
Oculus Rift dia fitaovana iray izay nandinika tsara izahay noho ny antony roa lehibe. Ny iray amin'izy ireo dia ny hanohanana ny Android ary ny faharoa dia noho ny lanja lehibe nananany tamin'ny fampiroboroboana ny fahatongavan'ireo mpisolo toerana hafa, izany hoe ny fisokafan'ny tontolo vaovao iray izay ahitantsika ireo karazana fampiharana sy ireo lalao video handentika ireo mpilalao amin'ny tantara sy ny zava-niainany mbola tsy nisy toy izany.
Ary farany, i Oculus dia nanamafy ny andro hahafahantsika mitahiry ny kinova ho an'ny mpanjifa ny fitaovana virtoaly virtoaly. Ny andro dia 6 Janoary, rahampitso fotsiny amin'ny andron'ny mpanjaka. Ho an'ity, misy ny mpamaky fotoana navoaka tao amin'ny tranonkalany izay tonga amin'ny endrika fahatsiarovana ho an'ireo izay tsy mino fa afaka mahazo fitaovana manova ny fitondran-tena sasany mifandraika amin'ny lalao video sy fampiharana sasany izay hanova fotoana sasany izy ireo tonga tena tsara manabe sy mampiala voly, ankoatr'izay ho bizina.
1 Oculus Rift no eto
2 Daty manodidina ny vanim-potoana virtoaly Oculus
Oculus Rift no eto
Avy amin'ny bilaogy izay nampiasain'izy ireo nampahafantatra momba ny famandrihana Oculus Rift, ireo rehetra hamidy dia ho tonga miaraka amin'ny lalao roa maimaimpoana. Ireo dia 'Lucky's Tale' ary ilay EVE efa nandrasana hatry ny ela: Valkyrie ', lalao video roa izay hanokatra faravodilanitra vaovao ho an'ny hafa maro ho avy ary hamela ireo mpilalao marobe hiditrika amin'ny adventures izay hanemitra ny fahitana antsika amin'ny 360 degre ary hahatonga ny zava-misy hihoatra ny tolona hafa sy ny faravodilanitra hafa.
Fantatray ny andro famandrihanao, rahampitso ihany, ny tsy fantatsika dia ny vidiny, iray amin'ireo antsipiriany mbola tsy naseho ary heverina fa rahampitso, avy amin'ny tranonkala voaomana amin'ny fanombohana manerantany, dia toa mandrisika ny mpividy ho amin'ny fividianana azy na, manosika ny hafa hiverina hitany fa somary mihoa-pampana. Enga anie ity farany tsy hitranga tahaka izany, ary afaka miditra amin'ny fitaovana virtoaly virtoaly avo lenta izay tsara indrindra ho an'ny mpampiasa izahay amin'ny farany.
Tokony ho fantatrao fa misy orinasa maromaro izay nanao fanazaran-tena tamin'ny fampivoarana ireo fitaovana virtoaly virtoaly. Ny iray manondro tsara dia ny fifanarahana teo amin'i Steam sy HTC for ento ny velona, izay eo amin'ny sasany amin'ireo mampiavaka azy dia ny habaka virtoaly 4 × 4 metatra hahafahan'ny mpampiasa mihetsika am-pitoniana mba hisorohana ny fikapohan'ilay biby goavambe virtoaly na hanao dingana tsara hisorohana ny fianjerana amin'ilay hantsana nosokafana teo aloha ny tongotrao.
Daty manodidina ny vanim-potoana virtoaly Oculus
Tamin'ny volana lasa dia nanomboka i Oculus zarao ny fanamboarana fitaovana farany nataon'i Rift mba hahafahan'ny mpandraharaha manavao ny lohatenin'izy ireo rehefa eo am-pelatanan'ny mpampiasa ity vokatra tsy mampino ho an'ny zava-misy virtoaly ity. Na dia manana vaovao ratsy momba ny Controller Touch aza izahay, satria hihemotra hatramin'ny tapany faharoa amin'ny 2016.
Inona no azon'ny mpampiasa ampidirina rehefa tonga ny Oculus Rift azy ireo Fandraisana an-tsary 360 degre, rafitra fanaraha-mason'ny antokon-kintana, fakan-tsarimihetsika ivelany, ary dial iray izay manamboatra ny halaviran'ny mason'ilay fitaovana. Ity no fitaovana goavambe meloka hanomezana traikefa zava-misy virtoaly faran'izay betsaka ary izay hanokatra tontolo vaovao, araka ny efa noresahiko, ka samy tafiditra ao anaty traikefa vaovao ny mpampiasa sy ny mpandraharaha izay mitondra antsika any amin'ny habaka hafa.
Fitaovana misaotra fampidirana an'i John Carmack ao amin'ny ekipa, mpamorona angano toa ny Doom, dia nandrisika ny fanantenana ny hampivoatra ny lalao video ity fitaovana ity. Noho io antony io, rahampitso dia ho andro tsara hahalalana amin'ny farany ny vidiny sy ny tena fiantraikan'ity fitaovana ity amin'ny varotra, izay amin'ny farany dia inona no hahatonga antsika hahita filokana sy lohateny bebe kokoa amin'ny ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Oculus Rift dia azo alahatra manomboka rahampitso amin'ny andron'ny mpanjaka
Lenovo dia nanambara ny fanamarihana K4 miaraka amin'ny scanner an'ny rantsantanana sy ny fahaizan'ny VR